Computer ကို Virus မ၀င်အောင်ကာကွယ်နည်း (၅) မျိုး - MYSTERY ZILLION
Computer ကို Virus မ၀င်အောင်ကာကွယ်နည်း (၅) မျိုး
January 2009 edited February 2010 in Antivirus & Virus
Computer ကို Virus မ၀င်အောင် ကာကွယ်နည်း (၅) မျိုး...................
၁။ မည်သည့် external device ကိုမှမတပ်ဆင်ပါနဲ့(CD-DVD များအပါအ၀င်)
၂။ internet မသုံးပါနဲ့၊ သုံးရင်လည်း မည်သည့် web site ကိုမှဖွင့် မကြည့်ပါနဲ့၊
၃။ Computer ကို မဖွင့်ပါနဲ့(မီးပလပ် မထိုးပါနဲ့)၊
၄။ Computer ကို အစကတည်းက မ၀ယ်ပါနဲ့၊
၅။ Computer ဆိုင်ရှေ့ကို ဖြတ် မလျှောက်ပါနဲ့၊
တော်တော်ကောင်းတဲ့ အကြံပြုချက်ဘဲ့ဗျား။ ကျွန်တော်လိုက်နာပါ့မယ်။ ၀ယ်ပြီးသားကွန်ပျူတာကို
ရိုက်ခွဲပြီး လွှတ်ပါလိုက်တော့မယ်။virus မ၀င်အောင်လို့။:))
တော်တော်နောက်တာပဲ။ တကယ်မှတ်လို့လာဖတ်ပါတယ်။ (
I support Ma Hololo Dilolo. That's right. I watch it like your mind, too.
ဆိတ်၀င် ဆိတ်စားလို့ လာကြည့်တာ
ဟုတ်ပါ့ကွန်ပျူတာကို virus မ၀င်အောင်လုပ်နည်းဆိုလို့ စိတ်၀င်စားလို့လာကြည့်ပါတယ်
လူရွှင်တော်နဲ့ တွေ့နေတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ရွှင်စရာလေးပါပဲ။
ဟုတ်ပါ့။ကွန်ပျူတာကို virus မ၀င်အောင်လုပ်နည်းဆိုလို့ စိတ်၀င်စားလို့လာကြည့်ပါတယ်။
လူရွှင်တော်နဲ့ တွေ့နေတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရယ်ရတယ်သိလား။ ရယ်မောခြင်းသည်အသက်ရှည်၏။ကျေးဇူးပဲ..ကိုစိုင်း။:))
Virus မ၀င်အောင် Harddisk ထဲသို့ ကာကွယ်ဆေးအနေနဲ့ရေထိုးထားပေါ့ဗျာ
ကျွန်တော်လည်း အဟုတ်မှတ်လို့ ဖတ်ကြည့်တာ...။ တော်တော်နောက်တဲ့လူပဲဗျာ..။
တစ်နေ့တစ်နေ့ Computer ရှေ့မှာထိုင်၊ အလုပ်တွေရှုပ်၊ ဟိုအကောင်တွေ့(Virus) သတ်၊ ဒီအကောင်တွေ့ scan ဖတ် နဲ့ အမြဲ ပင်ပန်းနေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ MZ ဘော်ဘော်များ အတွက် အပျင်းပြေသဘောဆောင်တဲ့ ဟာသလေး တစ်ခုပါ..... ဒီ Post လေးကိုဖတ်လိုက်ရလို့ အချိန်တွေ ကုန်သွားတယ်ဆိုတဲ့ member တွေ အတွက်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်...............:77:
ကျွန်တော့် အယူအဆကတော့ တစ်ချက်ပြုံးရင် တစ်ရက် အသက်ရှည်တယ် ဆိုတာပါပဲ........:)
(မှတ်ချက်။ ။ အမြဲ ပြုံးနေသော မောင်ပြုံး(ညီလေးပြုံး) ကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့.....):D
:68: ) ) ) ) ) ) )
မထူးပါဘူးဗျာ။အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်နဲ့ (ဒါမှမဟုတ်) ဘုန်းကြီးသာ၀တ်လိုက်ပါတော့ဆိုလဲပြီးတာပဲကို။ လူဂျိုးကြီး ရီရတာ အူတောင်နာတယ်။ )
မယုံနိုင်လောက်အောင် ကာကွယ်နည်းတွေက သာလွန်းပါတယ်ဗျာ.... :77:
တော်တော် နောက်တတ်တာပဲနော် ..တကယ်ကို ဟုတ်လှချည်လားလို့..နောက်သလားလ ို့ဗျာ..
တော်တော်ဆိုးတဲ့လူ သူများက အဟုတ်မှတ်လို့ သွားလူဆိုး ခေါ်ဘူး။
အဟုတ်မှတ်လို့ လာကြည့်တယ် အကိုက တကယ်နောက်တာပဲဗျာ
၁ အစကတဲက computer ကိုမသင်ပါနဲ့
၂ computer ရှိ ရင် virus ပြသနာကို တချိန်မဟုတ် တချိန် ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် computer ကိုလုံးဝမဝယ်ပါနဲ့
လူနောက်ဂျီးးနော်..ကော်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့ကြားက မနည်းရအောင်ဖွင့်ဖတ်ထားရတာ :2:
အော် နောက်တက်တယ်နော်:14: အဟုတ်မှတ်လို. အိပ်ရေးပျက်သွားပြီ (:((:68::68::)):)):)):)):)):68::68:
ကိုကို စိုင်းကျော်စွာေ၀ နောက်တစ်ချက်ကျန်သေးတယ်လေဗျာ ကွန်ပျူတာကို ၀ယ်ကိုမသုံးနဲ့ အဲဒါဆို ဗိုင်းရပ်စ် အသေတောင်မ၀င်တော့ဘူး ဟဲဟဲ:)) နောက်တာနော် အတည်မယူကျနဲ့ နောက်တစ်ခုမေးချင်လို့ သိတဲ့ ကိုကို မမ တို့ ဖြေပေးပါနော် အိမ်မှာလေ အနော်စက်က ကွန်နက်ရှင်က ကောင်းတယ်ဗျာ proxy ကလဲ မှန်ရက်သားနဲ့ G-talk တစ်မျိုးထဲ ၀င်လို့မရဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သားသားကို ကူညီကျပါအုံး အဲ G-talk ကို uninstall လုပ်ပြီး install ပြန်လုပ်တာလဲ မရဘူးဖြစ်နေတယ် ကူညီဖြေရှင်းပါအုံး အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်လျှက် :77::77:
computer ရဲ့ system time ကိုတစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်ပါခင်ဗျာ.... ခောတ်လွန်ေနေရင်သော် လည်းကောင်း ခော်နောက်ကျနေရင်သော် လည်းကောင်း gtalk ကဝင်မရပါခင်ဗျာ ... အချိန်လေးတစ်ချက်လောက်ညှိသုံး ကြည့်ပါခင်ဗျာ... gtalk တစ်ခုထဲမရတာဆိုရင်တော့အစဉ် ပြေသွားမှာပါ...
Virus ကြောက်တယ်ဟုတ်...ဘာမှ မလုပ်နဲ ့လို ့
ရယ်သောသူသည် အသက်ရှည်၏ ပေါ့ :d:d:d
ဘာလို့ စိတ်တိုရတာလဲဗျာ........ :106:
အရမ်းတော်တဲ့ technical ဒီလို technical မျိုးဟာသပြောဖို့ mz မှာလိုတယ်
He is angry because you builtaspam thread. Don't you know that. But I think no mod or min see your thread as spam. I wonder why? May be arr ....... that is ......that is the secret affair between you all.
ကျွန်တော်တော့ကွန်ပျူတာ virus ၀င်ပြီး အိပ်ရေးပျက်လိုက်ရတာ
အကြံလေးကြိုက်တယ်ဗျာ... CPU နဲ့ motherboard ကို heat မတက်အောင် ရေတိုင်ဆီထဲနှစ်ပြီး မီးဖွင့်သုံးပေါ့ဗျ.... ကွန်ပျူတာ heat မတက်အောင်လုပ်နည်းလေ.. ဘာ အအေးပေးစနစ်မှ မလိုဘူး..
ဖတ်ပြီးသောအခါ ရေမရှိသောချောင်းကို လိုက်ရှာမိပါသည်။
တကယ်ကြီးမှတ်တာ ဗျာ လူဆိုး ... သူခိုး ... ဂျပိုး.... ရေလညး် ချိုးဘူး :d
Thiri.ydn wrote: »
ရေမရှိသော ချောင်းဆိုတာ ဘယ်လိုချောင်းမျိုးလည်း ဟင် မတိလို ့နော် ကိုစိုင်းကျော်စွာေ၀ က
ဟာသအနေနဲ ့ရေးလိုက်တာပါ သူရေးထားတဲ့ window registry အကြောင်း မဖတ်ဖူးလို ့ထင်တယ်
registry ကိုပိုင်မှတော့ သူ ့အတွက်က ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ မျော့ကလေးပေါ့ လက်နဲ ့ခွာလိုက်ယုံနဲ ့ရတယ်
ဟဲ့............. ဟဲ့ ................. မျော့ ဆိုတာ လက်နဲ့ ခွာလို့ရဘူးလေ.............. ဆားနဲ့ တို့ရတယ်.............. :d
အာ ကိုစိုင်း မတိရင် မတိတလိုနေပါဗျ နောက်မှပြောပြမယ် ဘာမှလည်း တိဘဲနဲ ့နေစမ်းပါ:14::p
charcole wrote: »
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ........ ဟီဟိ........... စရ နောက်ရကျိုး နပ်တာပေါ့............
ခါဂျာတကယ်မှတ်လို့လာကြည့်ပါတယ် ဂလိုလူကြီးလဲတိ၀ူး .....ဇွတ်
အင်းဗျာ စတစ်ထဲဗိုင်းရပ်၀င်ပြီးကွန်ပစ်တာ ကိုပါ ကူးသွားလို့ဆိုင်ကလည်း window ပြန်တင်ခိုင်း်နေတာနဲ့စိတ်လေလေနဲ့:33: အမ်ဇက်မှာ မွေနေတာ ဒါလေးတွေ့လိုက်တောအဟဲ